बिरामीको पेटबाट निकालियो ८ वटा चम्चा, २ स्क्रुड्राइभर, २ टुथब्रस र १ चक्कू ! – – Nepali News Portal in Nepali
काठमाडौं : भारतको हिमालञ्चल प्रदेशमा एक बिरामीकाे पेटबाट ८ वटा चम्चा, २ स्क्रुड्राइभर, २ टुथब्रस र १ चक्कू निकालिएकाे छ । तपाईं हामी कतिले समाचार सुनेका छौं, डाक्टरको लापरबाहीले कोही बिरामीको पेटको अपरेशन गर्दा पेटभित्रै कहिले कैंची, त कहिले कपडाको टुक्रा छोडिएको हुन्छ । तर याे घटना अलि पृथक देखिएएकाे छ ।
श्री लालबहादुर शास्त्री गभर्मेन्ट मेडिकल कलेज मन्डीका चिकित्सकले शनिबार ३५ वर्षीय एक बिरामीको पेटबाट ८ वटा चम्चा, २ वटा स्क्रुड्राइभर, २ वटा टुथब्रस र १ वटा चक्कू निकालेका हुन् । यी बिरामीको उपचारमा संलग्न डाक्टर निखिलले भने, ‘हामीलाई जब यस घटनाबारे थाहा भयो ।
त्यसपश्चात हाम्रो टिमले अकस्मात बिरामीको अपरेशन गर्यौ । अब अहिले उनको स्वास्थ्य स्थिति जोखिममुक्त छ ।’ उनका अनुसार उनी मानसिक रोगबाट ग्रसित बिरामी हुन् । उनले भने, ‘किनभने कोही पनि आम नागरिकले चम्चा र चक्कू खान सक्दैन । यो एकदम आश्चर्यजनक घटना हो ।’
उनले अगाडी थप्दै भने,‘अहिलेसम्म अपरेशनको समय कैंची वा कुनै अजार पेटमै रहेको घटना बाहिर आएको थियो तर यो घटना भने दुर्लभ खालको छ ।’ अचम्म मान्नु पर्ने यो पनि कुरा छ कि उनले कसरी यी सामान खाए होलान् ? जुन अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
यो घटनाले विशव नै अहिले अच्चममा परेको छ । मानव इतिहासलाई चुनौती दिने यो घटना भएको छ । सामान्यतया कुनै मानिसले ८ वटा चम्चा, २ स्क्रुड्राइभर, २ टुथब्रस र १ चक्कू खाना सक्ने कुरा सामान्य होईन ।
२ टुथब्रस र १ चक्कू
८ वटा चम्चा
अर्जेन्टिनी खेलाडीकाे नजरमा ‘रोनाल्डोभन्दा मेस्सी धेरै स्वार्थी खेलाडी ’ किन?